Indlu yeGiannoullas Luxury2Bedroom eKalopanagiotis
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGeorge
Indlu ifumaneka kwiziko lelali yaseKalopanagiotis kwindawo ezolileyo kakhulu kwaye ilungile ukufumana ububele belali yasekhaya kwaye unazo zonke izibonelelo zeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide zangoku.
Indlu kaMakhulu uGiannoulla yakhiwa ngokutsha ukuze ibentsha kwaye isiko lixutywe netekhnoloji.
Ifenitshala, igumbi lokuhlambela kunye nazo zonke izixhobo zintsha kraca.
Wi-Fi, Netflix, PS3, USB-itshaja ziyafumaneka.
Izixhobo zasekhitshini ziyafumaneka kwizicelo zokuzilungiselela isidlo sazo. Ngaphandle kweveranda ilungele ukuzola kunye nokuphumla.
Ngaphandle kwiveranda eneembono ezintle kakhulu kwigadi yeentyatyambo ezifunayo zingonwabela iziselo ezivela kwiintlobo ngeentlobo zekofu (i-Nescafe, i-decaff, i-organic, ikofu yaseCyprus kunye neChocolate eshushu) okanye iiti ezinikezelwayo zincoma okanye wenze eyakho ibarbeque usebenzisa izixhobo ezinikezelweyo.
Ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokuhamba ungafumana ilifti yamazinyo ukuya kubumelwane obuphezulu bekukho iindawo zokutyela ezininzi ezinokutya okwahlukeneyo kwendawo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zalapha ekhaya. Kwakhona, ungafumana i-arhente yokurenta izithuthuthu ezi-4x4 ukuze ukhenkethe kwiindlela zehlathi ezikufutshane.
Ukudlula kwi-elevator yamazinyo ungena kwindawo endala kwaye yakhiwe ngokupheleleyo apho unokufumana iivenkile zalapha ekhaya, iivenkile zewayini, ithala leencwadi kunye ne-5-Star Spa resort (Casale-Panagiotis) apho unokufumana unyango olwahlukeneyo lwe-spa olujonge umlambo oqukuqelayo. ngaphantsi, okanye iglasi yewayini kunye nesitya samasi kwiVeranda yayo entle.
Ngaphaya koko, kwimizuzu eli-10 yokuhamba ungafumana enye imonki yaseByzantine yakudala (iLampadistis) eneMyuziyam exabisekileyo kwaye kumlambo okufutshane unokubona imithombo edumileyo yeSulfur ebekwe kule ndawo.
Ukuba uthanda ukuthatha uhambo olude (imizuzu engama-20) okanye uqhube (imizuzu emi-5) ungandwendwela indawo yokugcina amanzi edama laseKalopanagiotis apho unokuthenga iintlanzi ezikhule apho kwaye uzilungiselele isidlo sakho sangokuhlwa.
Nangona ndihlala eNicosia ndihlala ndifumaneka kwizicelo zam nokuba kukusombulula naziphi na iingxaki okanye ukwenza iingcebiso ngeendawo ezinomdla ezigcweleyo kule ndawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kalopanayiotis, Nicosia